knowledge Archives - Page4of6- Chelmo News Portal
Home›Category: "knowledge" (Page 4)
လူတိုင်း အရပ်ရှည်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
“အရပ်ရှည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက အွန်လိုင်းမှာ အမေးများပါတယ်။ သေချာတွက်ကြည့်ရင် အရပ်ရှည်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေ များများစားစား မရှိပါဘူး။ အရပ်ရှည်ဖို့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို အဓိကထားပြီး ပြောင်းလဲပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အနေနဲ့ အရပ်ရှည်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်… အရပ်ရှည်ဖို့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်က ...
Homemade Hand Gel ပြုလုပ်နည်း
အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတောအတွင်း ပိုက်ဆံလဲအများကြီးကုန်စရာမလိုတဲ့ Homemade Hand Gel လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလဲ အများကြီးမလိုတဲ့ အပြင် လုပ်ရတာလဲ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ 1.အရက်ပြန်ကို များများထည့်ပါ။ 2.ပြီးရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်Gel အနည်းငယ်ကိုရောထည့်လိုက်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ဖက်ထည့်ထားတော့ အသားအရေကိုလဲ ထိန်းသိမ်းထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်နော်။ 3.အရက်ပြန်ကြောင့် အသားခြောက်တာတွေ၊ ...
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာဆိုရင် အသားအရည်အတွက်သာမက ဆံပင်ကိုပါ သန်စွမ်းကျန်းမာစေတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်များစွာသော ကောင်းကျိုးတွေကိုပါ ရရှိစေနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးစွမ်းတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် မျက်နှာလေးကြည်ပြီး Glowချင်သူတွေအတွက် ဒိန်ချဉ်အစစ်လေး(၂)ဇွန်း၊ ပျားရည်က ၁ဇွန်း၊ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးတစ်ခြမ်း၊ သံပုရာရည် သုံးစက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးရည်၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ နနွင်းမုန့်နည်းနည်းကို ရောသမမွှေပြီး လိမ်းပေးရုံနဲ့ မျက်နှာအသားအရည်ကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေမှာပါ ...
ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါ ပြီးဆုံးသွားချိန်၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် ၆ချက်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒီရောဂါကြီးဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ပပျောက်သွားမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီရဲ့ ကြိုးစားမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အားလုံးပါဝင်ကူညီ ကြိုးစားမှုကြောင့် ရောဂါကြီး ပပျောက်သွားချိန်မှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်ရအောင်။
အိမ်မက်ထဲမှာ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာ တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အိမ်မက်တွေကိုပဲမက်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အချမ်းသာဆုံး ထိပ်တန်း ကိုရီးယား မိန်းကလေးIdol (၁၀) ယောက်
(၂၀၁၉)ကနေ (၂၀၂၀) အတွင်း အချမ်းသာဆုံး ကိုရီးယားမိန်းကလေး Idol တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်.. 10. Jennie Kim ထိပ်တန်းမိန်းကလေးအဆိုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BLACKPINK ထဲက Jennie လေးက ပိုင်ဆိုင်မှု $11 Million ရှိပါတယ်။ 9. Lisa BLACKPINK ...
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြတယ် ကြိုက်ကြတယ် သံယောဇဉ်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာ ရှေးရေစက် အတိတ်ကံ ဖန်လာလို့ပဲ မဟုတ်လား ? ကိုယ်သိပ်ချစ်ရသူရဲ့ မျက်နှာကလေး မြင်လိုက်ရရင် ပျော်ရွှင်ရသလို ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရဲ့ အသံကလေး ကြားလိုက်ရရင်လည်း ကြည်နူးကြရတယ်။ ဒါဟာလည်း စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲစွာနှစ် ချစ်မိသူတိုင်း ...
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့သူက ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတာကို မသိတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုကနေတဆင့် သူ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းလို့တော့ရပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့သူကရော ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေမလားဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလိုက်ရအောင်နော်။ ၁.မျက်လုံးချင်းခဏခဏဆုံသူ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသဘောကျပြီဆို သူနဲ့အမြဲ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ မသိမသာခိုးကြည့်တတ်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံသွားရင် ချက်ချင်းပြန်လှည့်သွားတတ်ပါတယ်။ ...
ရေစိတ်ကြိုက် ကစားလည်း အလှမပျက်စေမယ့် မိတ်ကပ် ပစ္စည်းတွေ အကြောင်း
မကြာခင် သင်္ကြန် ကျရောက်တော့မှာ ဖြစ်လို့ မဒီလေးတွေ အနေနဲ့ သင်္ကြန်မှာကဲဖို့ အတွက် စိတ်ပူရမယ့် အထဲမှာ Makeup look ကလည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လည်နေရင်း မိတ်ကပ်တွေကွက်တာ၊ EyeLiner ...
ကမာ္ဘ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် (၅) ခု
လူငယ်တွေမှာ ကိုယ့် ဘ၀ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့စိတ်ကူးကောင်းတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရပြီးကြတဲ့ လူတွေ အချို့ကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ပညာ ဆက်လက်လေ့လာရင်း ကိုယ့်ဝါသနာကို ထုဆစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ ကျောင်းကို တက်ရဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ ဆိုတာတွေကို သိထားဖို့လည်း ...
စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် D.O
By yamin oo
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် ROSÉ ရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်များ
SF9 အဖွဲ့ဝင် Rowoon ရဲ့ ဒရာမာအသစ် “She Would Never Know” ကို supporting လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Lee Jaewook
စစ်ထဲကပြန်လာပြီးနောက် တစ်ခါမှမထားဖူးတဲ့ဆံပင်ပုံစံနဲ့ ပရိတ်သတ်ရှေ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Lee Jong Suk
No.5(A), Wingabar Street, Bo Cho 1 Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar.